အီရန် ဖောက်သည် လည်ပတ်ခဲ့သည် ငါတို့ စက်ရုံ ဘို့ ဝယ်သည် APG စက် နှင့် မှို! - Jiangshan ဟွာအာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား နည်းပညာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
အီရန် ဖောက်သည် လည်ပတ်ခဲ့သည် ငါတို့ စက်ရုံ ဘို့ ဝယ်သည် APG စက် နှင့် မှို!
Jiangshan Huaao Elactricity Technology Co. , Ltd. သည်ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းနှင့်လှပသောပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသော Jiangshan မြို့ငယ်လေးတွင်တည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် APG ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်မှိုများကိုပြည်ပသို့တင်ပို့ရောင်းချရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီးကြီးမားသောအောင်မြင်မှုများရရှိခဲ့သည်။
ယနေ့အထိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ယူအက်စ်၊ ရုရှား၊ တောင်ကိုရီးယား၊ အိန္ဒိယ၊ ဒူဘိုင်း၊ ကိုလံဘီယာ၊ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်း၊ မလေးရှား၊
Aprilပြီလအစောပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အီရန်နိုင်ငံရှိဖောက်သည်အသစ်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဤဖောက်သည်ကိုနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးတိရစ္ဆာန်များမှတဆင့်တီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို ၂ နှစ်ကျော်ကြာစာတိုက်မှလိုက်နာခဲ့သည်။ ဒီတစ်ခါတော့သူတို့ကစက်ရုံကိုလာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်
စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်စိတ်အားထက်သန်မှုရှိပါသည်။ဖောက်သည်သည်ကုမ္ပဏီတွင် ၂ ရက်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ Epoxy ဗဓေလသစ်ဆေးထိုးစက်နှင့်ပုံသဏ္theာန်၏အရည်အသွေးနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုများစွာအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ သူတို့ကငါတို့ကိုလည်းပစ္စည်းကိရိယာများ5ဝယ်ယူရန်ဆန္ဒရှိသည်။
ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ပို၍ ဝေးကွာ။ ဝေးလံခေါင်ဖျား။ ပိုမိုကောင်းမွန်လာရန်ဆန္ဒရှိသည်။
ဝါဒဖြန့်ခြင်း အစီအစဉ် မူကြမ်း ဘို့ ထုတ်ကုန် အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ၏ Epoxy ဗဓေလသစ် APG ပစ္စည်းကိရိယာ အလိုအလျောက် Feedin